Knec oo Been Abuur ku tilmaamntay Shahaadada Dugsiga Sare ee Gubernatoore Hassan Joho – Radio KeyFM
Home / Somali Language / Knec oo Been Abuur ku tilmaamntay Shahaadada Dugsiga Sare ee Gubernatoore Hassan Joho
Radio Key 27th March 2017	Somali Language Leave a comment 289 Views
Gudiga imtixaanada qaran ee Kenya (Knec) ayaa warqad ay jawaab ahaan ugu celisay madaxa laanta dambi baarista ugu sheegtay in Hassan Joho ay been abuur tahay warqadiisa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare.
Waxaa suurta gal ah in uu ku waayo tartanka gubernatooraha Mombasa hadii la xaqiijiyo shahaadooyinkiisa Jaamacadeed in aysan shaqaynayn.
Sii hayaha madaxa fulinta ee Knec, Ms Mercy Gathigia Karogo ayaa qoraal ay ugu jawaab celisay madaxa laanta dambi baarisa Ndegwa Muhoro ugu sheegtay in ay ogaadeen warqada la miin-guuriyay ee imtixaanka KCSE ee Joho ay tahay been abuur.
“ Iyada oo la raacayo codsiga baaritaanka iyo xaqiijinta natiijada imtixaanka dusgsiga sare Joho Hassan Ali ee sumada waraaqda CID/SEC/4/4/3 ku taariikhaysan 25th January, 2017…… Joho Hassan Ali iskuma diiwaan galin,umana fariisan imtixaankii KCSE 1992 ee iskuulka Serani Secondary School iyada oo la raacayo tirada fadhiga imtixaanka 160092024” ayay ku tiri Ms Korogo qoraalkeeda.
Ms Karoge ayaa u qortay waraaqdaasi Mr Muhoro,iyada oo ka jawaabaysa codsigii DCI ee la xiriiray baaritaanka iyo xaqiijinta natiijooyinkii imtixaan ee Mr Joho.
Afhayeen u hadlay Joho ayaa sheegay in uu gubernatooruhu u fariistay imtixaankii KCSE 1993,waxaana uu wax lagu qoslo ku tilmaamay warqada kasoo baxday Knec.
Previous Labo Qof oo ku dhintay Shil ka dhacay Narok
Next Marsabit : EACC oo Baaraysa Saraakiil lagu tuhunsan yahay Iibsashada Gargaar loogu talagalay Dadka Abaaruhu saameeyeen